သဘာဝဆန်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ မြင်တဲ့ သူတိုင်းအေးချမ်းစေတဲ့ ယဉ်လတ် ရဲ့ ပုံရိပ်များ – XB Media Myanmar
သဘာဝဆန်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ မြင်တဲ့ သူတိုင်းအေးချမ်းစေတဲ့ ယဉ်လတ် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
အက်ရှင်မင်းသမီးလေးလို့ လူသိများတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လတ် ဟာဆို ရင် သရုပ်ဆောင် ပီပြင်ပြီးကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် သူမကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ် ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော်။
ယဉ်လတ်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုလည်း ရိုက်ကူးထားသူပါ။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်း ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ယဉ်လတ်က သဘာဝဆန်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ မြင်တဲ့ သူတိုင်းအေးချမ်းစေတဲ့သူမရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ယဉျလတျက ” ရငျဘကျခငြျးနီးဖို့ အခြိနျတှေ အကွာကွီးမလိုဘူးဗြ …” The moment I found Happiness “ကြှနျမနဲ့ သူမတို့ရဲ့ လှတျလပျပွီး ပြောျရှှငျ ကွညျနူးခဲ့ရတဲ့ အခိုကျတနျ့လေး … တကယျက ကြှနျမတို့ စတှေ့ခဲ့တာ #မွသိနျးတနျစတေီမှာ… “မ ခွထေောကျလေး တဈဖကျကို ဒီလိုလေးထောကျလိုကျ ခါးလေးမတျထား လကျကလေးက ဟော့ဒီလိုလေး ဆံပငျလေးကိုသပျလိုကျ… အဲ…. ရပွီ အဲ့တိုငျးလးနေ.. ” ဆိုပွီး သငျပေးကာ … ကြှနျမရဲ့ နောကျမကွာခငျတငျမညျ့ ပုံလေး တှရေဲ့ Pose အတှကျ Stylist က သူမ…. ”
“နာမညျက “ခစြျဆုဝေ” တဲ့…တဈခါကွားရုံနဲ့ မမေ့တော့မယျ့ နာမညျမြိုး…ဟိုဘေးက ပိစိလေးက ရှှခေတျေ.. အဲ…အလယျကတော့ ကွယျစငျလေးပါဗြာ… တမနကျလုံး #မွသိနျးတနျမှာ တို့အုပျစု အမှှေးတိုငျတှေ ပတျထှနျးလိုကျ ( ရစေကျစုံအောငျ ကုသိုလျအတူလုပျကွမယျ ဆိုပွီး ) ပနျးတှေ အတူကပျလိုကျ လှကေားမယျ ဓာတျဖမျးလိုကျ နဲ့ သံယောဇဉျက မပွတျနိုငျပဲ #ပုထိုးတောျကွီး ထိ ခေါျလာတာ … hee… အာ့နဲ့ စကားတပွောပွောနဲ့ ကြုပျတို့ # ကလေးတဈအုပျ ကို ဓာတျ ဖမျးေ ပးရငျး လိုကျထိနျးပေးရှာတဲ့ #အဈကိုတောျ လေးယောကျ ရယျ… ”
“မန်တလေးမယျ အလုပျတှနေေ့ညဆကျနခေဲ့တာတောငျ..သှားခငြျတဲ့နရော အပငျပနျးခံပွီး ရနျကုနျထိ တရေးမှမအိပျပဲ မောငျးပို့ပေးတဲ့ ကြုပျ အဖေ ရယျ… ဘယျသှားသှား သူ့ တူမ နောကျ အမွဲလိုကျပေးရှာတဲ့ ကွီးကွီးရယျ…ပူဆာတိုငျး မွနျမာဝတျစုံ လှလှလေး ခြုပျပေးတဲ့ #Designer #KoWinKo တို့ရဲ့ ကြေးဇူး နဲ့…ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ပုံလှလှ လေးတှေ ဝငှေပါတယျဗြာ…ဒါလေးတှကွေညျ့ရငျး…ကြုပျကို ပိုပိုခစြျလာရငျတော့… တတျနိုငျဘူးရယျ ဗြ….နောျ့…hee….ဘာဖွဈဖွဈဗြာ…ကလေးကို နားလညျပေးပွီး ပြောျအောငျထားပေးကွတဲ့ ကိုသကျ ရော ကိုခမြျး ရော… ကြေးဇူးပါဗြ… အရမျးပြောျရှှငျခဲ့ရတယျဗြာ…ခိုတောငျမုနျ့တီေ လးလညျး ဘယျမေ့မတုနျး…😁” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Photo;Ko Thet Oo Nge, Ref&Credit:momolay.com